University of Erlangen Nuremberg - Halalino an-tany hafa any Eoropa
Oniversiten'i Erlangen Nuremberg Details
fanafohezan-teny : FAU
Créé : 1742
Aza adino ny ifanakalozy hevitra Oniversiten'i Erlangen Nuremberg
Misoratra anarana ao amin'ny Oniversiten'i Erlangen Nuremberg
Oniversiten'i Erlangen Nuremberg dia fikarohana oniversite-panjakana any an-tanànan'ny Erlangen sy Nuremberg in Bavaria, Alemaina. The anarana Friedrich-Alexander dia avy amin'ny oniversite mpanorina voalohany Friedrich, Margrave ny Brandenburg-Bayreuth, ary ny mpanao soa Christian Frederick Charles Alexander, Margrave ny Brandenburg-Ansbach.
ao Alemaina, kanto nentim-paharazana liberaly anjerimanontolo tsy matetika injeniera manana sekoly na sampan-draharaha. Na izany aza, FAU no manana miavaka injeniera sampam-pianarana.
FAU no faharoa lehibe indrindra ao amin'ny Oniversitem-panjakana ny fanjakana Bavaria. manana 5 fahaizanareo, 23 departemanta / sekoly, 30 pitsaboana departemanta, 19 mizaka tena departemanta, 656 mpampianatra, 3,404 mpikambana ao amin'ny akademika mpiasa sy ny teny mafy 13,000 mpiasa.
In ririnina enim-bolana 2014/15 manodidina 39,085 mpianatra (anisan'izany ny 3,556 vahiny mpianatra) voasoratra anarana ao amin'ny oniversite ao amin'ny 239 saha ny fianarana, niaraka tamin'ny 2/3 nianatra tao amin'ny tobim-pianarana Erlangen sy ny sisa 1/3 ao amin'ny toeram-pianarana ny Nuremberg. Ireo antontan'isa FAU nataony tao amin'ny lisitry ny ambony 10 anjerimanontolo lehibe indrindra any Alemaina.
In 2013, 5251 mpianatra nahazo diplaoma avy amin'ny oniversite sy ny 663 doctorates ary 50 post-doctorat taratasy misy hevitra no voasoratra anarana. Ary, FAU nandray 171 tapitrisa Euro (2013) famatsiam-bola ivelany tamin'izay taona, mahatonga izany ny iray amin'ireo antoko matanjaka fahatelo-vatsian'ny oniversite any Alemaina.
In 2006 ary 2007, izay tafiditra ao amin'ny hetsika tsara indrindra-pirenena, FAU no voafidy ny Alemana Research Foundation ho iray amin'ireo mpandresy ao amin'ny Anjerimanontolo alemà Excellence Initiative. FAU ihany koa ny mpikambana ao amin'ny DFG (Anarana Research Foundation) ary ny Top Industrial Mpitantana for Eoropa tambajotra.
Amin'ny Academic Ranking ny World Anjerimanontolo for taona 2014, FAU laharana faha faharoa eo alemà oniversite ao Engineering / Teknolojia sy Computer Siansa vondrona rehetra fandaharana efatra masontsivana TOP, FUN, HiCi ary PUB.
Faculty ny Humanities, Social Sciences, sy ny teolojia
Faculty ny Business, toekarena, sy ny Lalàna
1743 - Ny University dia naorin'i Margrave Friedrich ny Brandenburg-Bayreuth
Ny University in Erlangen dia naorina teo an ny fanahin 'ny nohazavaina absolutism. Ny asa ny oniversite alemà tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo dia ny hanompo ny zavatra ilain'ny fanapahana ny maro amin'ny alalan'ny fanaovana vatsy ho an'ny fanabeazana sy ny fampiofanana ny mpiasam-panjakana mba hanatsarana ny laza ny mpanapaka.
Izany koa no voalohany fototry ny antony manosika ho Margrave Friedrich ny Brandenburg-Bayreuth, izay nanorina ny Friedrichs-Universität ny fanapahana amin'ny 1743 miaraka amin'ny fanampian'ny Margravess Wilhelmine sy ny Chancelier voalohany ao amin'ny University, Daniel de Superville.
Izany no fahatelo amin'ny oniversite mba hampitoerina amin'ny Franconia, araka ny anjerimanontolo ny Altdorf sy Würzburg, ary monina any amin'ny tanànan'i Erlangen amperora any amin'ny teo aloha ny akademia Knight miorina amin'ny Hauptstraße. Ny fanokafana ofisialy ao amin'ny Oniversiten'i nitranga tamin'ny 4 Novambra 1743, hetsika iray izay mbola ankalazaina isan-taona any amin'ny maty academicus.
1769 - Ny University dia nitatra ny Margrave Alexander
Tamin'ny fotoana nanombohan'izany, ny University in Erlangen dia iray avy amin'ilay kely indrindra amin'ny karazany andrim-panjakana. Miisa 64 ireo mpianatra nisoratra anarana tao amin'ny Oniversite vaovao ao amin'ny taona ny fototra, ary nampianarina ny 16 mpampianatra; ny isan'ny mpianatra eo ho eo sisa amin'ny manodidina 200 nandritra ny fotoana.
Am-polo taona vitsivitsy voalohany ao amin'ny University dia ny fisian'ny olana ara-toekarena voamariky ny hatramin'ny margraviate ny Brandenburg-Bayreuth dia somary kely fa tsy tena manankarena. Tsy mandra- 1769, rehefa maty ny Bayreuth tsipika ka ny margraviate ny Brandenburg-Bayreuth dia tafaray amin'ny an'i Brandenburg-Ansbach, fa Friedrichs-Universität Nomena mafy orina kokoa ara-bola fototra. Ho fanomezam-boninahitra ny Margrave Alexander, ny mpitondra vaovao, izay ihany koa ho tonga ny voalohany University mpiaro lehibe, ny University dia nantsoin'Andriamanitra hoe Friedrich-Alexander-Universität tamin'izay taona.
Ny nentim-paharazana isan-karazany ao anatin'ny fitsipika nampianarina ny toetsaina ny Teolojia, lalàna, Fitsaboana sy filozofia. Ankoatra ny Hohenzollern lapa izay, tahaka ny an-trano ny dowager, ihany no nandray anjara sisim-bahoaka, ny kely tanàna Erlangen margravial tsy nanana zava-dehibe ara-politika, ara-toekarena na ara-kolontsaina andrim-panjakana, ary ny mpampianatra ny University izao nahazo toerana be ao an-tanàna ny fiaraha-monina.
1810 - Franconia Lasa ampahany amin'ny Bavaria
Dimam-polo taona taorian'ny fototra, ny University nandalo fiovana lehibe noho ny korontana ara-politika. Ny famindram-pahefana ho an'ny Prosianina satro-boninahitra ao amin'ny 1792, ho any amin'ny fanjakana frantsay in 1806 ary farany ho an'ny Bavarian satro-boninahitra ao amin'ny 1810 Nanova ny margravial University ao amin'ny toetry-mihazakazaka andrim-panjakana. Raha izany? Fa very ny ankamaroan 'ny fizakantena, toy ny azy fahefana sy ny tombontsoa manokana nomena ny oniversite olom-pirenena, izany ihany koa ny University kokoa ny bola.
Ny isan'ny mpianatra efa nitsangana, ary mbola miovaova amin'ny manodidina 400 amin'izao fotoana izao. Ny drafitra centralize oniversite fianarana ao amin'ny Oniversiten'i Landshut, napetraky ny Bavarian Minisitry-panjakana, Maximilian Joseph Montgelas, Nidika izany fa teo am-piandohan'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo ny hoavin'ny amin'ny University dia nanao tsinontsinona ny mihoatra ny indray mandeha. Tsy nitrosa ny tafavoaka velona amin'ny farany ny zava-misy fa nanana ny sampam-pianarana ihany ny Protestanta teolojia in Bavaria. Nanana izany tsy mbola misy, rehetra ny Bavarian mpianatra ny Protestanta teolojia, izay efa nitombo isa be vokatry ny fampidirana Franconia vao haingana ho any Bavaria, mety ho voatery hianatra ivelan'ny Bavaria.
1818 - Ny fanomezana Schloss dia amin'ny fomba ofisialy any amin'ny University
In 1818, ny University nahazo manan-danja maro ny trano vaovao. Rehefa maty i Sophie Caroline, ny faharoa vadin'ny mpanorina ny University, izay nonina tany Erlangen ho dowager hatramin'ny 1764, Maximilian Mpanjaka I Josefa avy Bavaria nanome ny Schloss, ny Schlossgarten, ny orangery sy ny trano teo aloha tompony ny margraves ho any amin'ny University.
Ny tapany voalohany tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo ihany koa ny nahita an'i Wilhelm lehibe of Humboldt ny fanavaozana ny foto-kevitra ny oniversite fianarana, in izay misolovava ny fitambaran'ny fikarohana sy fampianarana. Lectures aloha izay nifantoka tamin'ny fomba hentitra exegetic fomba nankatoavina izao nifantoka tamin'ny fomba fiasan'ny ny fianarana akademika sy ny tari-dalana mankany mahaleo tena fikarohana.
1824 - Erlangen University Hospital dia naorina
Ny fanorenana ny University Hospital Erlangen, ny hopitaly ao amin'ny faritra atsinanan'i ny Schlossgarten, no voalohany tetikasa fanorenana lehibe ataon'ny amin'ny University ary vita tamin'ny 1824. Ny fampandrosoana haingana mankany mitombo fahasamihafana eo amin'ny foto-kevitra, ary ny seha-pikarohana vaovao ny fitsaboana sy ny siansa ao amin'ny tapany faharoa tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo nila ny fanorenana trano vaovao maro manodidina ny Schlossgarten sy miaraka Universitätsstraße, izay tonga mandrafitra ny fototry ny University. Ny tena manaitra trano avy amin'io vanim-potoana no Kollegienhaus (1889), Anatomy sy ny aretina ny trano (1897 ary 1906) ary ny University Library (1913).
1890 - Ny University manana eo ho eo ny mpianatra iray arivo
Ny fampielezana ny habeny dia akaiky ny fananganana sampan-draharaha vaovao maro amin'ny Institiota ao anatin'izy ireo izay, toy ny avy amin'ny departemanta miavaka, Tsy vitan'ny hoe nampianatra fitsipika akademika, fa miankina ihany koa nitarika fikarohana. Mpianatra isa Nitombo be koa ny ao amin'ny tapany faharoa tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo. Tamin'ny vanin-taona mafana enim-bolana 1890, ny isan'ny mpianatra voasoratra anarana nihoatra ny 1000 marika voalohany,
izay midika fa ny laharana faha isan'ny University 15 teo anivon 'ny 21 anjerimanontolo ao amin'ny Alemana Fanjakana eo amin'ny lafiny habe. Fampandrosoana ity nanova tanteraka ihany koa ny fifandraisana misy eo amin'ny University sy ny tanàna. Erlangen kosa ny endriny tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo efa nanapa-kevitra ny Huguenot po sy ny asa-tanana, tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo ny University nanomboka ny hilalao ny anjara asa manan-danja kokoa.
Anisan'ny malaza indrindra mpampianatra izay nampianatra tao amin'ny Oniversiten'i no teolojianina Adolf of Harleß, ny mpahay lalàna Christian ny fahasambarana, ny mpampianatra momba ny fitsaboana Franz Penzoldt, ny mpahay tantara Karl Hegel, ny filozofa Ludwig Feuerbach, ny mpampianatra alemà Benno of Wiese, Tatsinanana ny mpampianatra momba ny fianarana sy ny poety Friedrich Rückert, ny mpahay matematika Max Noether, ny fizika Eilhard Wiedemann, ny mpahay simia Emil sy Otto Fischer, ny bôtanista Johann Daniel Christian Schreber, ny pharmacists Theodor sy Ernst Martius, i Enoka ny zoologist Zander, sy ny mpandinika ny nofon-Bruno of Freyberg.
Ny sasany Erlangen 's malaza mpianatra dia ahitana ny theologist Wilhelm Löhe, mpahay lalàna sy Prosianina fanjakana Karl Freiherr of Stein any amin'ny Old Stone, ny dokotera Samuel Hahnemann, ny mpanoratra Heinrich Wackenroder, Ludwig Tieck, Daniel Schubart sy Aogositra Graf of Platen, ny mpahay simia Josto of Liebig, ny fizika Georg Simon ohm sy ny mpahay matematika Emmi Noether.
1920 - Ny Pro-Rector lasa ny Rector
Ny nipoaka ny Ady Lehibe Voalohany ao amin'ny 1914 Nisy vokany be teo amin'ny University. Ary tamin'ny andro voalohany indrindra fanetsiketsehana, ny Kollegienhaus , ny Schloss sy ny sampan-draharaha maro tao Universitätsklinikum Erlangen niova fo ho hopitaly ny naratra. Manodidina ny telo vazan-mpianatra no niharan'ny voantso ho fisoratana anarana na an-tsitrapo. Nitarika ho goavana indray mitete ao amin'ny isan'ny mpianatra, izay nanohy nianatra. Nandritra ny taona nisy ady ihany matetika momba ny 300 mpianatra eo amin'ny Erlangen.
Ny zava-nitranga ny Bavarian ny Revolisiona 1918 ary 1919 ary ny manaraka fanafoanana ny fitondram-panjaka dia midika fa ny anaram-boninahitra 'Rector Magnificentissimus' izay teraka teo aloha ny fitondrana ankehitriny mpanjaka nanjavona. Ny anjara fanompoan 'ny Pro-Rector Koa dia niova ho' Rector (Magnificus)'in 1920. Toy izany koa, ny teny hoe 'Pro-Rector' nosoloina ny anaram-boninahitra teo aloha 'Exprorektor'. Fa ny ankamaroan'ny mpianatra, ny taona maro avy hatrany taorian'ny ady lehibe voalohany dia voamariky ny fahantrana sy ny maro ny mpianatra avy mahantra fiaviana tonga tao amin'ny Oniversiten'i amin'ny fanantenana ny fananganana hoavy vaovao ho an'ny tenany na dia eo aza ny fianarana tsotra.
Ny vidim-piainana sy ny manam-pahaizana Tsy niraharaha ny fikambanana maro koa ny manjo. Ny Mpianatra ny solontenan'ny Komitin'ny naorina tany 1919 ary nanaraka tamin'ny 1922 izay ankehitriny ny Studentenwerk (Student Services) izay, in 1930, nanokatra ny Studentenhaus izay mbola mijoro amin'ny Langemarktplatz amin'izao fotoana izao. Raha jerena faobe, na izany aza, araka ny fitomboana haingana eo afovoan'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo, ny taona 1920 dia fotoam-stagnation ho an'ny University.
1928 - Ny Faculty ny Siansa dia naorina
Ny fitomboan'ny zava-dehibe ny siansa momba ny zavaboary izay lasa tena hita ao amin'ny tapany faharoa tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo nahatonga fiovana ao amin'ny University ny rafitra. In 1928, siansa momba ny zavaboary dia tafasaraka eny izay avy eo amin'ny sampam-pianarana ny Humanities sy ny Siansa Sosialy sy nanome fahaizan toerana misy ny.
1933 - Ny University milatsaka ny fizakantena rembin'ny Sosialisma Nasionaly
Ny toe-draharaha-pirenena ny hevitra efa mazava teo amin'ny porofo ao amin'ny Oniversite any Erlangen nandritra ny Repoblika Weimar, ary tamin'ny Novambra 1929, ny Alemana Sosialista National Association Mpianatra nahazo ny maro an'isa tanteraka ny seza ao amin'ny Mpianatra ny solontenan'ny Komitin'ny fifidianana voalohany na oviana na alemà oniversite. Nandritra ny taona maro ny Nazia jadona, Erlangen tsy namela misy ny fisehoan-javatra izay nitranga ihany koa amin'ny anjerimanontolo hafa, toy ny fandroahana ny mpampianatra vonona ny rantsan-tongony ny antoko tsipika, ny boky fandoroan-May 1933, na ny fampidirana ny foto-kevitra izay manaraka ny fanaon'izao Nazia foto-kevitra, toy ny 'firazanana fikarohana'.
Ny University ny akademika fizakantena nesorina nandritra ny vanim-potoana Nazia sy ny toro lalana Führer koa ampiharina amin'ny lalàm-panorenana ny oniversite, toy ny tsy nisy intsony Rector voafidin'ny ny professorial tena, nefa dia notendren 'ny Reichsminister ny raharaha akademika. Araka ny zava-nitranga ao amin'ny oniversite manerana an'i Alemaina amin'izao fotoana izao, ny isan'ny mpianatra tany Erlangen latsaka be noho ny fampianarana ny Nazi politika.
1945 - Ny fanorenana indray misy mijaly University
Tamin'ny faran'ny Ady Lehibe Faharoa, Erlangen no hany tanàna oniversite any Alemaina, hafa noho Heidelberg, izay efa saika afa-nandositra tanteraka ny fandringanana. Mpianatra nirohotra ho amin'ny University rehefa mampianatra indray tao amin'ny ririnina enim-bolana 1945/46, ary nisy dimy ny isan'ny mpianatra toy ny teo aloha ny ady. Kosa amin'ny fahavaratra enim-bolana 1927 nisy 1340 mpianatra sy folo taona taty aoriana nisy 967, ny fahavaratra enim-bolana 1947, ny University nanana 5316 mpianatra.
Na izany aza, tahaka ny hafa alemà anjerimanontolo tsikelikely hisokatra indray ny varavarany, ny isa in Erlangen nanomboka handao indray ho any amin'ny faran'ny taona 1950, ka noho ny ririnina enim-bolana 1956/57, Erlangen no kely indrindra amin'ny oniversite any Alemaina Andrefana.
Ny University izao nila trano vaovao manome ampy-trano rehetra ny departemanta sy Institiota. Ao anatin'ny ezaka mba hiaro amin'ny Anjerimanontolon'i ny toetra sy ny trano tsirairay ny fampivondronana miaraka ao afovoan-tanàna, ny trano vaovao, dia tsy naorina teo amin'ny toerana mitoka-monina fonenan'ny mpianatra avy amin'ny tanàna foibe, toy izay nitranga tany an-kafa, fa ireo kosa naorina teo amin'ny toerana isan-karazany ny fototry izay nanompo teo aloha tanjona hafa.
Izany no nitranga tamin'ny zoki-trano in Bismarckstraße, izay sarotra ho an'ny vaovao lalàna, teolojia, humanities sy ny siansa sosialy dia tsy misarom-boaly amin'ny 1953. Koa nanaraka trano vaovao tao afovoan-tanàna, indrindra fa ny Faculty of Medicine, toy ny Sampan-draharahan'ny ny hoza-pitatitra ao amin'ny 1978, izay naorina tamin'ny Schwabachanlage izay toeram-pitsaboana aretin-tsaina aloha ny nitoetra teo.
Ny tena miavaka fanitarana izay natao tao amin'ny Oniversiten'i tamin'ny taona 1960 tany an-tsaha ny injeniera. Ny taorian'ny ady mila ny toetr'andro nanome ny tosika hanampy ny sampan-draharaha ny injeniera, ny faniriana izay efa naneho efa hatramin'ny 1903. Staff amin'ny Faculty ny Siansa ankehitriny dia naneho ny filàna mahaleotena sampam-pianarana ho an'ny herinaratra sy ny milina injeniera, izay nomena ny fanohanan'ny Antenimieran-doholona ao amin'ny 1957.
1961 - Ny Faculty ny Business, Toekarena sy ny Siansa Sosialy no naorina
Fotoana fohy rehefa afaka izany fanampiny, ny University nitarina tamin'ny lalana hafa amin'ny alalan'ny fampidirana ny municipally-vatsian'ny oniversite ny raharaham-barotra, toekarena sy ara-tsosialy siansa in Nuremberg, naorina in 1919, ho eo an-University mba hamorona izay dia ny fahenina sampam-pianarana. Nanomboka teo amin'ny University Nandray ny anarana hoe eo ambany izay dia fantatra amin'izao andro izao, Oniversiten'i Erlangen-Nuremberg.
Ny fampianarana ny toekarena sy ny fitantanan-draharaha, izay nanana hevitra mandraka nilalao tsy ampy taona ihany no anjara asany eo amin'ny izay dia ny Faculty of Humanities sy ny Siansa Sosialy in Erlangen, mety izao ho entina avy amin'ny maro kokoa amin'ny fotoany avy izy toerana in Nuremberg. Ity amalgamation ny fitomboana haingana eo amin'ny isan'ny mpianatra izay tonga tampon'isa vaovao tamin'ny faran'ny taona 1960.
1966 - Ny Faculty of Engineering dia naorina
In 1962, taorian'ny adihevitra lava be, Bavarian tamin'ny farany ny parlemanta nanapa-kevitra ny hanorina Faculty of Engineering in Erlangen. Noho izany, ny University efa nandresy avy hamely ny tanànan'i Nuremberg izay efa hangatahana fa ny ara-teknika oniversite hampitoerina amin'ny Nuremberg nandritra ny taona maro.
Koa satria ny faritra ny fanorenana velabelarina be tany ilaina ho an'ity tetikasa tsy misy tao afovoan'i Erlangen, ny fototra ho toeram-pianarana vaovao oniversite nampitondraina any atsimo atsinanan'ny tanàna 1964. Ny fombafomba fametrahana ny Faculty of Engineering, izay lasa fahafito ao amin'ny sampam-pianarana FAU tamin'ny fotoana, nitranga in 1966. Amin'izao fotoana izao, ny University no hany rafitra tany Alemaina tamin'ny fahaizana ny injeniera izay ho tonga eo amin'ny rafitra efa misy ny fikarohana kilasika amin'ny oniversite fa tsy nanangana ho mizaka tena oniversite.
1968 - Ny hetsiky ny mpianatra dia manangana
ho FAU, tahaka ny any an-kafa, ny manaraka no anjakan'ny taona ny hetsiky ny mpianatra, hetsika izay ho toy izany fiantraikany maharitra eo amin'ny fiainana akademika. Ny hetsi-panoheran'ny mpianatra, izay nahakasika anjerimanontolo manerana an'i Alemaina, dia voalohany dia setrin'ny olana izay fotsiny oniversite-mifandray, toy ny fianarana mahantra toe-javatra. In 1969, ny hetsiky ny mpianatra nitombo kokoa hiringiriny ary lasa fitaovana fanoherana ny rafitra ara-politika amin'ny ankapobeny. Ao amin'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny vondrona ara-tsosialy hafa, nitombo izao an izay nanjary fantatra amin'ny anarana hoe ny fanampiny-parlemantera hetsiky ny mpanohitra.
Ary nisy fifanandrinana lehibe, indrindra eo amin'ny adihevitra ny amin'ny Bavarian Fampianarana Ambony Act ny 1974, fizarana izay voarara solontenan'ny mpianatra fampiharana ny fe-potoana ara-politika ankapobeny, ary ny tonian'ny Alemana Fampianarana Ambony Act ny 1976. Ireo taona maro ihany koa ny mikasika ny maro nitondra fiovana ho amin'ny University ny sary-bahoaka, toy ny maro hatry ny ela no nofoanana nanorina fomban-drazana. Nisy tsy hisy intsony ny mpampianatra manao natopatopan'ny sy, in 1968, ny fankalazana ny Andron'ny Mpanorina ny, ny 'maty academicus', izay mandra-dia efa natao tao amin'ny Santionan'izany fiangaly famirapiratan'ny ny Redoutensaal, Nafindra tany amin'ny fa tsy flamboyant ambience ny Auditorium Maximus izay efa nitranga hatramin'ny.
1972 - Ny Faculty ny Fampianarana dia naorina
Ny Faculty ny Fanabeazana dia naorina teo an 1972, lasa ny fahavalo ny University sampam-pianarana tamin'izany fotoana. Naniry avy amin'ny Institute for Mpampianatra Fampiofanana izay dia naorina teo an 1956 ary taty aoriana upgraded in 1958 ho tonga ny College Fanabeazana Nuremberg, fanofanana mpampianatra oniversite, talohan'ny nahatongavany ho sekoly ambony ao amin'ny FAU. By 2007, ny University nanana 11 fahaizanareo, tahaka ny Faculty ny Humanities sy ny Siansa Sosialy nizara roa toko roa-misaina sy ny tsy miankina ny Faculty ny Siansa dia latsaka ho telo hafa.
FAU tonga vaovao niavaka teo amin'ny ririnina enim-bolana 1991/92 rahoviana, voalohany, nisy ny 30,000 mpianatra. Mandra-antenatenan'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo, manodidina 40 isan-jaton'ny mpianatra no nisoratra anarana tao ny toetsaina ny Teolojia sy ny Lalàna, fa nanomboka tamin'ny tapany faharoa tamin'ny taonjato faha lehibe iray isan-jaton'ny mponina ny mpianatra, dia nosarihana manoloana ny fitsipika vaovao ny injeniera sy ny fitantanan-draharaha, toekarena sy ara-tsosialy siansa.
2000 - New fanavaozana hatao
Tamin'ny fiandohan'ny amby roa-polo tamin'ny taonjato voalohany, Oniversiten'i Erlangen-Nuremberg dia miatrika zava-tsarotra vaovao. Ny fanitarana ny trano ao amin'ny Südgelände (atsimo toeram-pianarana) ary ny fananganana trano vaovao tao afovoan-tanàna amin'izao fotoana izao fanovana ny ara-batana endriky ny University. In 2000, ny Nikolaus Fiebiger Center ny molekiolan'ny Medicine tamin'ny Glückstraße nisolo ny teo aloha sy ny trano fizika 2001 nahita ny fanokafana ny vaovao Röthelheim Campus amin'ny toerana nisy ny trano fitaovam-piadiana taloha. Ny dingana voalohany amin'ny fanorenana ny vaovao fandidiana tsy foibe dia nanomboka tamin'ny 2002.
Ny University dia haingana ho fampiharana ny changeover ny vaovao sy ny Bachelor ny Tompo ny diplaoma araka ny voalazan 'ny Bavarian-panjakana Minisitry ny Sciences, Fikarohana sy ny Zavakanto, ary ireo fandaharan'asa diplaoma nisolo ny teo aloha sy Magister Diplom fandaharana amin'ny faran'ny folo taona.
koa, mba hitana ny toerana mifaninana eo amin'ny ambaratonga iraisam-pirenena sy ny hihaona ireo zava-tsarotra ny hoavy, ny Antenimieran-doholona nifidy tamin'ny 7 Febroary 2007 mba hanatanteraka ny fanavaozana ny feno ny rafitra University. Koa, ao amin'ny ririnina enim-bolana 2007/08, ny iraika ambin'ny folo lahy dia averina alamina fahaizanareo ho any amin'ny dimy fahaizanareo izay manana amin'izao fotoana izao ny University. Ireo fahaizanareo ireo zana-mizara ho departemanta miaraka amin'ny rafitra anatiny izay natao mba hanatanjahana efa misy fiarahamiasa sy ny fahafaha-mamorona ho an'ny vaovao.
Ianao ve mila ifanakalozy hevitra Oniversiten'i Erlangen Nuremberg ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Oniversiten'i Erlangen Nuremberg tamin'ny Map
Photos: University of Erlangen Nuremberg ofisialy Facebook
Oniversiten'i Erlangen Nuremberg Hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny Oniversiten'i Erlangen Nuremberg.